MatePad 11 na MatePad Pro: Harmony OS na imewe di elu | Gam akporosis
MatePad 11 na MatePad Pro: Harmony OS na nhazi nke di elu
Michael Hernandez | | Noticias
Huawei na-aga n'ihu ịkụ nzọ n'ahịa maka mbadamba nkume n'agbanyeghị ndọghachi azụ nke ụdị ngwaọrụ ndị a na-ata ahụhụ n'oge na-adịbeghị anya n'ihi mmụba nke nha ihu igwe ama afọ mgbe afọ. Agbanyeghị, mgbe arụchara ọrụ ahụ nke ọma, ọhaneze maara etu ọ ga-esi dabaa na ụdị ndị a.
Huawei eweputala Huawei MatePad 11 na MatePad Pro ọhụrụ iji melite ahịa maka mbadamba, dakọtara na HarmonyOS na ezigbo ọmarịcha mma. Chọpụta anyị mbadamba Huawei ọhụrụ ndị a dị njikere ịkụ tebụl na ọnụahịa dị, gịnị bụ njirimara ọrụ ha?
1 Huawei MatePad 11 nke ekwentị
2 Nke a bụ Huawei MatePad Pro
Huawei MatePad 11 nke ekwentị
Anyị na-amalite na nnukwu n'ụlọ, ngwaọrụ nke ga-abịa na sentimita 11 na mkpebi nke 2560 x 1600 pikselụ na ọnụego ume ọhụrụ nke 120 Hz, ee, na usoro LCD IPS. Movekwaga ya gaa na ike kachasị n'okpuru nhazi Qualcomm Snapdragon 865 ọ na-abịa na 6 GB nke RAM, n'otu ụzọ ahụ anyị ga-ahọrọ maka nchekwa nke 64 GB ma ọ bụ 128 GB gbasaa site na microSD.
Maka oku vidiyo anyị họọrọ maka igwefoto 8 MP n'ihu ihu na oghere f / 2.0 na igwefoto azụ 13 MP na ọkụ LED na oghere f / 1.8. Anyị ga-anụ ụtọ HarmonyOS dị ka sistemụ arụmọrụ, tinyere batrị 7.250 mAh nke nwere 22,5W ngwa ngwa ma anyị nwere WiFi 6, Bluetooth 5.1 na GPS na nkwado maka M-Pencil maka ọnụahịa nke ga-adị ihe dị ka euro 399 maka ụdịdị kachasị mkpa.
Nke a bụ Huawei MatePad Pro
Prodị "Pro" nke MatePad ga-abịa na plọg 12,6-inch na otu mkpebi mana oge a nwere ọnụego ume 60 Hz. n'ihi ya OLED panel na HDR na teknụzụ Dolby Vision. N'okwu a anyị nwere nhazi ụlọ Kirin 9000E tinyere 256 GB nke nchekwa nwere ike ịgbasa site na microSD na 8 GB nke ebe nchekwa RAM, ihe a niile n’okpuru HarmonyOS, OS ohuru nke ulo oru Asia.
Anyị nwere igwefoto n'ihu nke 8 MP nwere oghere f / 2.0 na igwefoto 13 MP n'azụ nwere ọkụ LED na oghere f / 1.8. N'akụkụ ya, nnwere onwe ga-ezu na 10.050 mAh ya na ụgwọ ngwa ngwa ruo 40W yana otu njikọta njikọ dị ka MatePad 11 maka ego ga-ebido na euro 799.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » MatePad 11 na MatePad Pro: Harmony OS na nhazi nke di elu
Ihe egwu egwu 7 kacha mma maka gam akporo
Nke a bụ Huawei P50 ọhụrụ, ihe igwefoto na-atụ ụjọ ma na-arụ ọrụ